Maanta waxaa jira codsiyo badan oo loo heli karo taleefannada Android. Nasiib darrose, dhammaantood lagama heli karo Google Play Store. Sidaa darteed adeegsadayaasha waxaa lagu qasbay inay raadiyaan habab kale. Waad ku sharxi kartaa inaad soo dejiso APK-ka codsiga la yiri si aad ugu rakibto taleefankaaga.
Qeybtaan waxaan ku tuseynaa APK-yada ugu wanaagsan ee codsiyada aad ku rakibi karto Android. Codsiyada aaminka ah, ee xiisaha weyn leh iyo inaanan ka heli karin Google Play. Soo ogow dhammaan barnaamijyada aad kala soo dejisan karto APK-yadan qaybtan.
Sida loo furo faylasha APK kombiyuutarka
Furitaanka faylasha APK-ka ee kumbuyuutarka kumbuyuutarkiisu waa maalmo kooban. Tan iyo markii la soo saaray Google Play Store sanadkii 2008,…
by Francisco Ruiz samee Bilaha 8 .
Muddo ka hor waxaan soo bandhigay midka aniga iyo inbadanba, (maqnaanshaha nooca lagu dhawaaqay ...
by Manuel Ramirez samee Bilaha 11 .
Dhowr maalmood ka hor waxaan ku ogeysiinay suurtagalnimada inaad soo dejiso sawirrada sawirada ee Pixel 5, ...
Soo degsasho kale oo aan u qaadan karno moobilkeenna Pixel oo leh APK-ka Google Camera 8.0 la qaatay ...
GCam hadda wax badan ayey ka heli doontaa kamaraddaada moobaylka sidii hore
Shaki la'aan, kamaradda Google waa mid ka mid ah aaladaha ugu wanaagsan ee aad heli karto haddii aad rabto inaad sida ugu badan uga faa'iideysato ...
Istuudiyaha Android ayaa la cusbooneysiiyay si loogu daro taageerada la hagaajiyay ee loogu talagalay taleefannada casriga ah
Istuudiyaha Android waa SDK-da ugu weyn ee loo abuuro barnaamijyada iyo ciyaaraha labadaba Android. Waxay kudareysaa emulator qalab lagu dhisay ...
Sida loo rakibo GCam on your OnePlus Nord
Soo saaraha Aasiya ayaa naga yaabiyey soo bandhigida OnePlus Nord, oo ah taleefan dhexdhexaad ah oo qiime u leh lacag ...
[APK] Waxaan horeyba ugu helnay wicitaano fiidiyoow Telegram. Marka waad ku raaxeysan kartaa iyaga oo ku jira Android-kaaga. (Video)
Sugitaan xoog leh ka dib, Telegram wuxuu isku dhajiyay ikhtiyaarka lagu sameeyo wicitaanada fiidiyowga nooca 7.0 ee codsigiisa, ...
Chrome wuxuu u boodayaa 64 gabal oo leh nooca 85
Bishii Diseembar 2017, wax yar uun ka dib markii Apple ka saartay dhammaan codsiyada 32-bit ee laga heli karo App-ka ...
Sida loo sameeyo YouTube waxay ku xasuusinaysaa inaad seexato
Google ma joojiso cusbooneysiinta barnaamijyadeeda si loo hagaajiyo barnaamijyadeeda xiddigga. Ragga weyn ee Mareykanka ah had iyo jeer waa layaabaa isagoo ku daraya qaar ...
[APK] Bakhaarka codsiga Nokia ee ku shaqeeya wax kasta oo Android 4.1 ah ama ka sareeya
[APK] Kaamirada ugu fiican Android-kaaga waxaa loo yaqaan Lenovo Super Camera waana bilaash
[PORT] U soo degsata asalka HTC player-ka qalabka kale ee Android, HTC Music apk